Pane chero ipi zvayo inoshandiswa neAmerica keyword software yekutangira?
Yatozivikanwa kare kuti kushandiswa kwakakodzera kwemashoko ekutsvakurudza ndeye pakati pezvikamu zvekutsvaga kweSearch Engine Optimization (SEO) uye nheyo yemazuva ano yekuDhinda marketing uye yeEcommerce bhizinesi rose, kunyatsorega kwauri kutengesa kusvika kure. Dzimwe nyanzvi dzeEOs dzinoti "zvakagadzirwa ndeye mambo. "Uye izvozvo zvinonzwisisika kwete kungofanana nekutsvaga kwekutsvaga kutsvaga kune injini huru seGoogle pachayo, asi pamabhizimusi ekutambisa-kutumira uye chero ipi zvayo purogiramu yepaIndaneti inobata nekutengesa zvekutengesa kuIndaneti, zvakadai seAmazon. Uye ngatitarisei - inofanira kunge isina kubva mubvunzo iyo inotangisa vatengesi ku Amazon vanoda keyword software kupfuura yezvose.
Uye kwete kungobuda kunze kwevanopikisa uye kutanga kutanga mukurumbira wavo uye vane simba sevatengesi vanobudirira vanofanira kutenga ne. Chinhu ichi ndechokuti hapana munhu anogona kuponesa mukati mechirwere chekukwikwidza kwemashamba, kunze kwekutsigirwa nekodzero Amazon keyword software, tracking vabatsiri uye zvigadziridzo zvekutengesa kuchengetedza chigadzirwa chakarongedzwa - logiciel gestion horaire de travail. Pakupedzisira - kukunda bhokisi rekutenga uye kugara pakati pezvinhu zvakagadzirwa zvinhu zvinotengeswa kune uko.
Saka, tichifunga kuti mashoko anokosha kutsvakurudza pachedu, pamwe chete nemararamiro ayo anokosha kwenguva refu okukwikwidzana, ndezvekukosha zvakakosha panzvimbo pemhando ipi neipi yehupfumi, heano mamwe nzira dzinoshamisa dzokusarudza zviri nyore asi kunyatsoita chaizvo Amazon keyword software tools for beginners. Tariro iwe uchatora kickstart yakanaka navo, zvechokwadi pasina kushandisa penny, sezvo imwe neimwe yeiyo Amazon keyword software zvishandiso inowanika mukusvikirika kushanduka paWebhu,.
Zvingaita sechisina-brainer, asi iyi inokosha yekushandisa inoshandiswa neshumba yevaya vekare veSchools yechikoro inogona kushandira kunyange vatengesi vevana muAmazzi sechinhu chikuru software inoshanda chaizvo. Chinhu ichi ndechokuti iyi yekugadzirisa mhinduro yakakura kwazvo kunyanya kune vanotanga. Kunyanya nokuti iyi zvigadzirisiti zvinyorwa zvinoshandiswa nekutsvaga kwenyika zvakanakisisa pakukupa mufananidzo mukuru unoratidza zvose zvaunogona kukunda kutsvaga mazwi uye nguva yakare-muswe pamwe, mazinga avo emakwikwi (kana zvisinei, kuti zvakaoma sei mashoko aya anonyanya kukoshesa) , uyewo wevheji yekutsvaga kutsvaga yako huru yekutsvaga mazwi. Uye hapana chikonzero chekuti data yakapiwa neGoogle inofanira kuva yakawandisa uye zvichida yakadzika zvikuru, ichikanganiswa pamwe kwete kubva kune imwe chete yemusika (saAmazon, eBay, Walmart, nezvimwewo.), asi akaunganidzwa kubva kuhupenyu hwose hwekutsvaga inowanikwa paInternet.
Pano pfupi pfupi mazano makuru anopiwa neGoogle's Keyword Planner kana akashandiswa mukugona Amazon keyword research software:
Funga kutora chikwata chako chinotarirwa panzvimbo yechinhu chitsva kana kutsva-mutsva kutsvaga kusanganiswa. Ingoita mukana wechikwereti, chero mutsara wechirevo, chigadzirwa chikamu, webusaiti, kana mugadziri - uye wapedza.
Iva nemufananidzo wakawanda wekutsvaga kwemazwi chero ipi zvayo yakagadzirwa nemagetsi-chaiwo emazwi makuru kana kuti inogona kukunda kushamwaridzana nekutsvaga kushandiswa nevashandi vari kurarama pasi rose.
Wedzera hurukuro yako yepamusoro yepamusoro uye yakatonyatsogadziriswa mazwi makuru nekuwana kunzwisisa kwakakosha uye kwenguva refu misi mikuru mazano mazano pakarepo. Uye usakanganwa kuti Google's Keyword Planner ndiyo chaiyo yegoridhe mukana wekurumidza kuziva nzvimbo yako yakavimbiswa-inonyanya kukoshesa mazita ekutsvaga nzvimbo (i. e. , guta, nyika, nenyika).
Kusiyana nedzimwe shanduro dzinonzi Amazon keyword software tools, iyi yose-round toolkit inonyanya kurongwa kukupa zvakananga keyword kunzwisisa - yakabatanidzwa zvakananga kubva kune vadiki vako , kana kuunganidzwa kubva kune vanobudirira zvikuru vachitengesa kune imwe nzvimbo paWebhu. Kuva nezvose zvekusununguka uye kubhadhara yakazara-mafuta version, Keyword Spy inzira yakanaka chaizvo yevatengi vatengesi kukurumidza kuenzanisa kutsvaga kwevheti kune chero chinhu chipi zvacho, maererano nekupa hurukuro yakawanda yezvinoenderana nekutsvaga kutsvaga uye inokurudzira yose yakareba-muswe masangano (pamwe zvichibvira LSI keyword zvisarudzo) iwe unorayirwa kuti uenzanise.
Iri sangano rekutanga reSeO rine bhaibheri rayo rekushandisa, iro rinogona kuva nyore imwe sarudzo inoshandiswa pakusarudza zvakanaka Amazon keyword software. Pakati pemakona ayo akasimba, zvinotevera zvinoshandiswa zvakanyatsoshandiswa mazwi makuru zvakaratidzwa zvakanaka zvakanaka-kuita: kutarisa kuoma kuenzanisa chero chero chinhu chinokosha, tsika yave mwedzi kutsvaga yevhesi yepamusoro, PPC ads management.
Iri zita rinotsanangurwa ndiro zita rinobatsira Amazon keyword software platform. Hungu, Keyword Tool haisi chinhu chimwe chete mubatsiri, asi iyo yose iri paIndaneti inopa hurukuro yehurukuro yakasununguka inowanikwa kuAmaov novice vatengesi kuti vawane yakanakisisa yekuita mazwi uye mazwi ekutsvakurudza kwenguva refu kwezvavanoita mazita. Cherechedza, zvisinei, kuti kuzarura zvimwe zvikamu zvakanyanyisa uye zvinonyangadza zvepuratifomu iyi, vatengesi vakawanda venguva yakawanda vanotengesa kuAmazon vachada kubhadhara iyo yakagadzirwa yakakurumbira inozivikanwa seChwordword Tool Pro.
KwFinder ndiyo yekupedzisira Amazon keyword software tool Ndinoda kukuratidzira nhasi. Iyi sarudzo yaizofananidza iwe zvakanakisisa kana zvasvika pakudzika mashoma ekugona kukunda misi-misi mikuru mazwi uye mitsva yekutsvakurudza yemiti yekuwana mukufarirwa pakati pevashambadziri vapenyu kusvikira pano. KwFinder inobatsira zvakaenzana neAmazon pachake chete, asi mamwe ose akakurumbira ecommerce platforms (seBay, Walmart, Alibaba store, nezvimwewo.), pamwe chete nedzimwewo, kunyange nzvimbo dzisiri dzekutengesa, dzakadai seYouTube video hosting service, nzvimbo yepiri yevakashanyira nyika. Mushure mezvose, ndakawana KwFinder kunyanya kubatsirwa, kunyanya nokuda kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvakadai sekunyorwa kwayo nyore-kusarudza nzira yekukurumidza kushandura zvinyorwa zvangu, nemamwe maitiro asi zvisingawanzoshandiswa zvakanyanya mazano kubva mu latent semantic indexing. mibvunzo yechinyorwa chimwe nechimwe chinodiwa, uyewo inogona kunge yakakosha kuoma.